Askarigu waa Astaanta Nabadgelyada iyo Jiritaanka uu Wadan leeyahay | Somaliland Post
Home Maqaallo Askarigu waa Astaanta Nabadgelyada iyo Jiritaanka uu Wadan leeyahay
Askarigu waa Astaanta Nabadgelyada iyo Jiritaanka uu Wadan leeyahay
Salaan kadib , Bushoyinka Afsomaliga ku hadla markay doonayaan in ay cid ay wax ku diidan yihiin dhaliilaan waa wax iska Caadi ah in ay Raad sadaan Salaan ama wax kale oo ay sii fuulaan si ay Taageero ugu helaan waxa ay sheegayaan taas oo inta badan sababta in ay ku xadgudbaan SHarafta iyo Karaamada Cid kale.
Hadii aan u gonad dego Ujeedada aan Maanta Qalinka u qaatay ,Dalkena JSL in badan waxaa dhegahayga ku sodhacaysa ASKARI Dalka ma xukumi karo , Askari Dalka laguma Aaminikaro , lkn waa in aynu isxasuusinaa in Cibaadada Alle oo aan si bilaa cabsi ah ugudano , Hurdada Habenkii oo aan si bilaa cabsi ah u seexano , Ganacsigeena oo aan si bilaa Cabsi ah uganacsano , Caruurteena oo waxbarashada si xor ah oo aan Cabsi yi ku jirin wax u barata , isusocodka Bulshadena iyo Adigoo halkaad doonto degi kara ama seexan kara.
Dhammaan inta aan sheegay iyo inkale oo kabadaniba waxay ku dhisan yihiin Illaahay Amarkii ASKARIGA Isagoo nolol Raaxo leh ku noolaan karayey , isaga oo Noloshaada oo kale ku nolaan karayey intaas oo dhan intuu iskagatagay , Waalidiintiisii iskaga tagay , Caruurtiisii iyo Xaaskiisii uu Jeclaa iskaga tagay oo kadoor biday in uu Milicda iyo Dabaysha Taagnaado , kadoor biday in uu DHaxanta Habeenkii sojeedo , ka doorbiday in uu Xabada Laabta u dhigto .
Hadaba Akhristaha SHarafta lehaw waxaad iswaydiisaa Suaalahan :
Adigoo ka shidaal qaadanaya Arimhaa aynu kor ku soosheegnay , Askariga ma masuuliyad gooniya ayaa Dalka kasaaran ? mise waxaa jira Xoog kale oo ku qasbaya in uu SHaqadan qabto ?
Ma Askariga yaa jecel in uu shaqadan qabto ?
Ma Askariga ayaa shaqo kaleDalka kawaayey ?
Ma Askariga ayaa SHaqo kale ( XIRFAD) aan aqoon ?
Hadii Askartuba SHaqada ay Dalka u hayaan diidaan maxaa inagu dhacaya ?
Gunta iyo gabagabadii Adigoo dhaliilaya Qof aad mabda,iyan kala aragti duwantihiin Xuquuq distoriya oo kula mid ahna leh , mafiicna in aad Ceeb oga dhigto Beri buu Askari ahaan jiray , Adigoo waliba Iskataagaya dhic kale islamarkaana Taxaya qodobo Xumaan ah oo SHaraf dil ku ah Rukun kamid ah rukumada Qarranka JSL ku taagan yahay.
F/G: Uma hadlayo Qof gaar ah (SHIQSI) kaliya waxaan tilmaamay in Askarigu Yahay Astaanta Nabadgelyada iyo Jiritaanka uu Qarranku leeyahay , sidaa daraadeed yadoo looga faaiidaynayo cid gaar ah aan si khaldan lo isticmaalin.
Allaa mahadleh qore : Axmedysin Cabdullahi Maxamud Baaryare